စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသစ်မှာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ဒေါ်အေးနုစိန်ကို ထပ်တိုးထည့်သွင်းခဲ့တာကို လက်ခံခဲ့တာက၊ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းအရမရင့်ကျက်သေးချိန်မှာ၊ အရင်အစိုးရမဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဒဏ်ခံရခိုင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်မျှော်မှန်းလုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့၊ ANP ပါတီ မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဦးလှစောက ဆိုပါတယ်၊ ကိုဝင်းမင်းကမေးထားပါတယ်။
အရင် ၁၁ ဦးပါ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ နောက်ထပ် ၅ ဦးထပ်တိုးဖွဲ့လိုက်တဲ့အထဲ၊ အခုလို ANP လက်ခံခဲ့ပုံကို ဦးဦးလှလှစောက -
ဦးဦးလှစော ။ ။ လက်ခံတယ်ဆိုတာကလေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီအပြောင်းအလဲမှာတော့၊ တစ်စုံတစ်ရာပူးပေါင်းပြီးတော့ အခြေအနေတရပ်ကို ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအခြေအနေအသစ်၊ အခု အခင်းအကျင်းသစ်ထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက် ဘာတွေများမျှော်လင့်နိုင်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဝင်းမင်း ။ ။ အဲ့ဒိတော့ အာဏာသိမ်းအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာရော အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူက ဘယ်လိုမျိုး သက်ရောက်မူရှိနိုင်မလဲ။
ဦးဦးလှစော ။ ။ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုပေမဲ့၊ ရခိုင်ရဲ့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေ ထူးခြားအခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ အခုဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းမှာတော့ ကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ် မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် Culture (ယဉ်ကျေးမူ) ဟာလည်း Mature (ရင့်ကျက်မူ) မဖြစ်သေးဘူး။ တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ရခိုင်မှာ ဒီတပ်မတော်နဲ့ AA (ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့) နဲ့ ကြားထဲမှာနော်၊ လောလောဆယ် အပစ်အခတ်ရပ်ထားတယ်ပေါ့နော်၊ Bilateral (နှစ်ဖက်လက်မှတ်) မထိုးပေမဲ့၊ အပစ်အခတ်ရပ်ထားတယ်၊ ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိနေတယ်။ နောက်တစ်ခုက ရခိုင်ပြည်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့၊ တခြားဒေသတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က မဝေဖန်လိုဘူး၊ ရခိုင်ပြည်မှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ NLD (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်) အစိုးရအနေနဲ့ တော်တော်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပေါ့နော်၊ လူထုနဲ့ဆက်ဆံရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးမူ၊ စီမံခန့်ခွဲမူ၊ အကျင့်ပျက်ချစားမူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့၊ ရခိုင်ပြည်သူလူထုကတော့၊ ဒီ NLD အပေါ်မှာတော့ သိပ်ပြီးတော့ ယုံကြည်မူမရှိဘူး။ NLD က နိုင်ငံရေးသြဇာလည်းမရှိဘူး။ နောက် ရခိုင်ပြည်မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လည်း၊ NLD ဘက်က နိုးနိုးကြားကြားမရှိခဲ့ဘူး။ တပ်မတော်ဘက်က တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ AA ဘက်က တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒိရိုက်ခတ်မူတွေတော့ နည်းနည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒိတော့ ဒီဟာတွေက တခြားဒေသတွေနဲ့တော့ မတူဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ပါတီရှင်သန်မူ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးမူ၊ နောက်ဖြစ်လာမယ့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့အနေအထားနဲ့၊ အခုလောလောဆယ်ဖြစ်စဉ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဘယ်လောက်အထိ ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မပြောတတ်ဘူးနော်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကတော့ တော်တော်လေးရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်နေတယ်။
ဝင်းမင်း ။ ။ အဲ့ဒိတော့ ANP ပါတီအတွင်းမှာရော အားလုံးလက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်၊ အခုလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်။
ဦးဦးလှစော ။ ။ အဲ့ဒိဟာက လောလောဆယ်တော့လေ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်မှာက စစ်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ထိခိုက်နာကျင်မူတွေရှိတယ်၊ AA ဘက်ကလည်းထိခိုက်နာကျင်မူတွေရှိတယ်၊ ပြည်သူတွေလည်းအများကြီး ဒီကြားထဲမှာ၊ စစ်ပွဲဖြစ်ထုံးစံအတိုင်း အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလည်း သေကြ၊ ကျေကြတယ်၊ အခုဆိုလည်း အကြမ်းဖက်ပုဒ်မနဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေ အများကြီးဖမ်းဆီးထားတာလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒိတော့ ဒီဟာတွေကတော့ တပ်မတော်နဲ့ AA နဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း၊ လမ်းကြောင်းတူတာတွေတချို. တွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စနဲ့ သူတို့က တွဲလုပ်တာပေါ့။ အဲ့ဒိတော့ ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုပေါ့နော်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ထွက်ပေါက်တစ်ခုရပြီးတော့၊ တစ်စုံတစ်ရာ အရင်တုန်းကထက်စာရင် ပူပင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကတော့ တစ်စုံတစ်ရာ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ အနေအထားရှိတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ တပ်မတော်ကိုရော၊ AA ကိုရော ဒါ ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊ ဒီအခြေအနေမျိုးကို NLD ကလည်း မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပြီးတစ်ခါ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့၊ တပ်မတော်နဲ့ AA နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးတော့၊ လုပ်တဲ့အပေါ်မှာလည်း၊ NLD ဘက်ကလည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တုံ့ပြန်မူတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ လောလောဆယ်မှာတော့၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးရှင်သန်ဖို့အတွက်တော့၊ ကိုယ့်ပါတီရှင်သန်ဖို့အတွက်တော့ လောလောဆယ်မှာ၊ လက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာတော့၊ တစ်စုံတရာတော့ ပါဝင်ပတ်သက်နေရဦးမှာပဲ။
ဝင်းမင်း ။ ။ အဲ့ဒိတော့ တခြားတိုင်းရင်းသားပါတီတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ အင်အားစုတွေနဲ့ရော၊ အခုလို ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ သက်ရောက်မူရှိနိုင်မယ်လို့ထင်လား။
ဦးဦးလှစော ။ ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အခုလောလောဆယ်မှာပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ့်ရခိုင်ဒေသ ကိုယ့်ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမူကိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ပဲ၊ အများကြီးစဉ်းစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီး တစ်ခုလုံးတော့ လွှမ်းခြုံပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ အဲ့လိုလွှမ်းခြုံစဉ်းစားပြီး ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ရာ အားကိုး ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ အစိုးရကလည်းပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကို ဖော်ဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့၊ ဟိုဖက်က ကမ်းလှမ်းလာတာကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံလိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်လောက်အထိ အတိုင်းအတာထိပူးပေါင်းမလဲ၊ နောက်တစ်ခုက လက်ရှိအစိုးရသစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုချင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ တည်ငြိမ်မူ၊ ဖွံ့ဖြိုးမူ၊ ငြိမ်းချမ်းမူကို ဘယ်လောက်ထိဖော်ဆောင်နိုင်မလဲ၊ အဲ့ဒါတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ
ဝင်းမင်း ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဦးဦးလှစော ခင်ဗျာ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ ပါဝင်ရေး ANP ဒေါ် အေးနုစိန် ဘာကြောင့် လက်ခံသလဲ
စဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီမှာ ပါဝငျရေး ANP ဒျေါအေးနုစိနျ ဘာကွောငျ့ လကျခံသလဲ
စဈအုပျခြုပျရေးကောငျစီသဈမှာ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) အဖှဲ့ ပွောခှငျ့ရ ဒျေါအေးနုစိနျကို ထပျတိုးထညျ့သှငျးခဲ့တာကို လကျခံခဲ့တာက၊ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးအရမရငျ့ကကျြသေးခြိနျမှာ၊ အရငျအစိုးရမဖျောဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ စဈဒဏျခံရခိုငျပွညျသူအကြိုးစီးပှားအတှကျမြှျောမှနျးလုပျတာသာ ဖွဈတယျလို့၊ ANP ပါတီ မူဝါဒရေးရာဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ဦးဦးလှစောက ဆိုပါတယျ၊ ကိုဝငျးမငျးကမေးထားပါတယျ။
အရငျ ၁၁ ဦးပါ နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီမှာ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ပဲ နောကျထပျ ၅ ဦးထပျတိုးဖှဲ့လိုကျတဲ့အထဲ၊ အခုလို ANP လကျခံခဲ့ပုံကို ဦးဦးလှလှစောက -
ဦးဦးလှစော ။ ။ ဒျေါအေးနုစိနျကိုလကျခံတယျဆိုတာက ကြှနျတျောတို့ ANP အနနေဲ့ လကျခံလိုကျတယျပေါ့။
ဝငျးမငျး ။ ။ ဘာကွောငျ့မို့လို့ လကျခံလိုကျတာလဲ။
ဦးဦးလှစော ။ ။ လကျခံတယျဆိုတာကလေ၊ ကြှနျတျောတို့ ဒီအပွောငျးအလဲမှာတော့၊ တဈစုံတဈရာပူးပေါငျးပွီးတော့ အခွအေနတေရပျကို ပူးပေါငျးပွီးတော့ လုပျဆောငျမယျဆိုတဲ့သဘောပေါ့နျော။ ကြှနျတျောတို့ ဒီအခွအေနအေသဈ၊ အခု အခငျးအကငျြးသဈထဲမှာ ရခိုငျအမြိုးသားအကြိုးစီးပှားအတှကျ ဘာတှမြေားမြှျောလငျ့နိုငျမလဲဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့ရငျးနဲ့ပေါ့နျော၊ ကြှနျတျောတို့ လုပျမယျဆိုတဲ့သဘောပါ။
ဝငျးမငျး ။ ။ အဲ့ဒိတော့ အာဏာသိမျးအစိုးရဖွဈတဲ့အတှကျပေါ့နျော၊ တဈနိုငျငံလုံးက ဆနျ့ကငျြနိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုးမှာရော အခုလိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျမူက ဘယျလိုမြိုး သကျရောကျမူရှိနိုငျမလဲ။
ဦးဦးလှစော ။ ။ တဈနိုငျငံလုံးဆိုပမေဲ့၊ ရခိုငျရဲ့ ထူးခွားဖွဈစဉျတှေ ထူးခွားအခွအေနတှေေ ရှိတယျ။ အခုဖွဈသှားတဲ့ဖွဈစဉျဟာ ဒီမိုကရစေီစံနှုနျးမှာတော့ ကောငျးတဲ့ဖွဈစဉျ မဟုတျဘူး။ မွနျမာပွညျရဲ့ ဒီမိုကရကျတဈ Culture (ယဉျကြေးမူ) ဟာလညျး Mature (ရငျ့ကကျြမူ) မဖွဈသေးဘူး။ တဈခုပွောခငျြတာကတော့ ရခိုငျမှာ ဒီတပျမတျောနဲ့ AA (ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့) နဲ့ ကွားထဲမှာနျော၊ လောလောဆယျ အပဈအခတျရပျထားတယျပေါ့နျော၊ Bilateral (နှဈဖကျလကျမှတျ) မထိုးပမေဲ့၊ အပဈအခတျရပျထားတယျ၊ ပုံမှနျဆကျဆံရေးရှိနတေယျ။ နောကျတဈခုက ရခိုငျပွညျမှာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျတော့၊ တခွားဒသေတှကေိုတော့ ကြှနျတျောတို့က မဝဖေနျလိုဘူး၊ ရခိုငျပွညျမှာတော့ ရခိုငျပွညျနယျကိုတာဝနျယူခဲ့တဲ့ NLD (အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ) အစိုးရအနနေဲ့ တျောတျောကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပေါ့နျော၊ လူထုနဲ့ဆကျဆံရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးမူ၊ စီမံခနျ့ခှဲမူ၊ အကငျြ့ပကျြခစြားမူနဲ့ ပတျသကျပွီးဖွဈတဲ့အခါကတြော့၊ ရခိုငျပွညျသူလူထုကတော့၊ ဒီ NLD အပျေါမှာတော့ သိပျပွီးတော့ ယုံကွညျမူမရှိဘူး။ NLD က နိုငျငံရေးသွဇာလညျးမရှိဘူး။ နောကျ ရခိုငျပွညျမှာရှေးကောကျပှဲဖွဈဖို့လညျး၊ NLD ဘကျက နိုးနိုးကွားကွားမရှိခဲ့ဘူး။ တပျမတျောဘကျက တောငျးဆိုခဲ့တယျ၊ AA ဘကျက တောငျးဆိုခဲ့တယျ၊ အဲ့ဒိရိုကျခတျမူတှတေော့ နညျးနညျးရှိတယျ။ အဲ့ဒိတော့ ဒီဟာတှကေ တခွားဒသေတှနေဲ့တော့ မတူဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ကြှနျတျောတို့ကတော့ ဒီအခွအေနမှော ကိုယျ့ရဲ့ပါတီရှငျသနျမူ၊ ဒသေဖှံ့ဖွိုးမူ၊ နောကျဖွဈလာမယျ့ နိုငျငံရေးအခွအေနကေိုစောငျ့ကွညျ့မဲ့အနအေထားနဲ့၊ အခုလောလောဆယျဖွဈစဉျမှာ တဈစုံတဈရာပါဝငျပတျသကျနတေယျပေါ့နျော။ ဘယျလောကျအထိ ထဲထဲဝငျဝငျဖွဈမယျဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတျောတို့ မပွောတတျဘူးနျော။ မွနျမာပွညျနိုငျငံရေးကတော့ တျောတျောလေးရှုပျရှုပျထှေးထှေးဖွဈနတေယျ။
ဝငျးမငျး ။ ။ အဲ့ဒိတော့ ANP ပါတီအတှငျးမှာရော အားလုံးလကျခံကွတယျပေါ့နျော၊ အခုလိုပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့အတှကျ။
ဦးဦးလှစော ။ ။ အဲ့ဒိဟာက လောလောဆယျတော့လေ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျမှာက စဈပှဲတှအေပွငျးအထနျဖွဈခဲ့တယျ။ တပျမတျောဘကျကလညျး ထိခိုကျနာကငျြမူတှရှေိတယျ၊ AA ဘကျကလညျးထိခိုကျနာကငျြမူတှရှေိတယျ၊ ပွညျသူတှလေညျးအမြားကွီး ဒီကွားထဲမှာ၊ စဈပှဲဖွဈထုံးစံအတိုငျး အပွဈမဲ့ပွညျသူတှလေညျး သကွေ၊ ကကြွေတယျ၊ အခုဆိုလညျး အကွမျးဖကျပုဒျမနဲ့ ရာနဲ့ခြီတဲ့ ပွညျသူတှေ အမြားကွီးဖမျးဆီးထားတာလညျးရှိတယျ။ အဲ့ဒိတော့ ဒီဟာတှကေတော့ တပျမတျောနဲ့ AA နဲ့ တဈစုံတဈရာ အပဈအခတျရပျစဲပွီးလိုကျတဲ့နောကျပိုငျး၊ လမျးကွောငျးတူတာတှတေခြို. တှဲလုပျတယျပေါ့နျော။ ဒီရှေးကောကျပှဲကိစ်စနဲ့ သူတို့က တှဲလုပျတာပေါ့။ အဲ့ဒိတော့ ရခိုငျပွညျသူတှအေတှကျတော့ ထှကျပေါကျတဈခုပေါ့နျော၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာရော ထှကျပေါကျတဈခုရပွီးတော့၊ တဈစုံတဈရာ အရငျတုနျးကထကျစာရငျ ပူပငျဆငျးရဲဒုက်ခတှကေတော့ တဈစုံတဈရာ ငွိမျးခမျြးနတေဲ့ အနအေထားရှိတာပေါ့နျော။ အဲ့ဒါကတော့ ကြှနျတျောတို့ကတော့ တပျမတျောကိုရော၊ AA ကိုရော ဒါ ကြေးဇူးတငျရမှာ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့၊ ဒီအခွအေနမြေိုးကို NLD ကလညျး မဖွရှေငျးနိုငျခဲ့ဘူး။ နောကျပွီးတဈခါ ကြှနျတျောသိသလောကျတော့၊ တပျမတျောနဲ့ AA နဲ့ အပဈအခတျရပျစဲပွီးတော့၊ လုပျတဲ့အပျေါမှာလညျး၊ NLD ဘကျကလညျး အပွုသဘောဆောငျတဲ့ တုံ့ပွနျမူတှေ မရှိခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒိတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ကတော့ လောလောဆယျမှာတော့၊ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံရေးရှငျသနျဖို့အတှကျတော့၊ ကိုယျ့ပါတီရှငျသနျဖို့အတှကျတော့ လောလောဆယျမှာ၊ လကျရှိအခငျးအကငျြးမှာတော့၊ တဈစုံတရာတော့ ပါဝငျပတျသကျနရေဦးမှာပဲ။
ဝငျးမငျး ။ ။ အဲ့ဒိတော့ တခွားတိုငျးရငျးသားပါတီတှေ၊ တိုငျးရငျးသားအဖှဲ့တှေ အငျအားစုတှနေဲ့ရော၊ အခုလို ဆုံးဖွတျခကျြအပျေါမှာ သကျရောကျမူရှိနိုငျမယျလို့ထငျလား။
ဦးဦးလှစော ။ ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ အခုလောလောဆယျမှာပေါ့ဗြာ၊ ကိုယျ့ရခိုငျဒသေ ကိုယျ့ရခိုငျပွညျသူတှရေဲ့ ငွိမျးခမျြးမူကိုဖျောဆောငျဖို့အတှကျပဲ၊ အမြားကွီးစဉျးစားနပေါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ တိုငျးပွညျတဈခုလုံး၊ ဒီမိုကရစေီအရေးတျောပုံကွီး တဈခုလုံးတော့ လှမျးခွုံပွီး၊ ကြှနျတျောတို့ စဉျးစားနိုငျတဲ့အနအေထားမရှိဘူး။ အဲ့လိုလှမျးခွုံစဉျးစားပွီး ကြှနျတျောတို့ တဈစုံတဈရာ အားကိုး ယုံကွညျခဲ့တဲ့ အစိုးရကလညျးပဲ၊ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျပွညျသူတှရေဲ့ကောငျးကြိုးကို ဖျောဆောငျမပေးနိုငျခဲ့ဘူးဆိုတော့၊ ဟိုဖကျက ကမျးလှမျးလာတာကို ကြှနျတျောတို့ လကျခံလိုကျတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဘယျလောကျအထိ အတိုငျးအတာထိပူးပေါငျးမလဲ၊ နောကျတဈခုက လကျရှိအစိုးရသဈဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လိုခငျြတဲ့ ရခိုငျပွညျရဲ့ တညျငွိမျမူ၊ ဖှံ့ဖွိုးမူ၊ ငွိမျးခမျြးမူကို ဘယျလောကျထိဖျောဆောငျနိုငျမလဲ၊ အဲ့ဒါတှကေိုတော့ ကြှနျတျောတို့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲ
ဝငျးမငျး ။ ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ဦးဦးလှစော ခငျဗြာ။
လွှတ်တော်သစ် မတိုင်ခင် ရခိုင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပရေး အလားအလာမရှိ (ANP ပြောခွင့်ရ ဒေါ်အေးနုစိန်)
အပစ်ရပ်သက်တမ်းတိုးတဲ့ထဲ ရခိုင်ပါတဲ့အပေါ် မျှော်လင့်ချက်တွေ တိုးလာ